बाह्रखरी उत्कृष्ट कथा द्वन्द्वपीडितको प्रमाण
बाह्रखरी - शनिबार, साउन १७, २०७७
माघको महिना, पश्चिमी वायुका कारण झमझम परिरहेको पानी भर्खर रोकिएको छ । कुमाख, निगालचुला, जैतपानीका डाँडा सेता देखिएका छन्, हिउँले ढपक्क छन् । रूकुमको सिस्ने हिमशृङ्खला सूर्यका किरणले टलक्क टल्किएको टाढैबाट देखिएको छ । हप्ता दिनदेखि धुम्म परेको आकाश खुलेको छ, घमाइलो घाम लागिरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानको कोठा नम्बर सातअगाडि बसिरहेको छु, घाम ताप्दै ।
सेवाग्राही कोही छैनन्, फुर्सदमा छु । ढाड सूर्यतिर फर्काएर आनन्दसँग बसिरहेको छु । खलङ्गामा गाडी नआउँदासम्म सेवाग्राही आइपुग्दैनन् । गाडी र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ, नङमासुको जस्तै ।
एक्कासि टकटकटक आवाज सुन्छु । सोच्छु, कोही आउँदै छ । आँखा आफ्नो अगाडिको बाटोमा दौडाउँछु, कोही देख्दिनँ । केको आवाज हो यस्तो ? आफैंलाई प्रश्न गर्छु । तुरून्तै जवाफ पाउँछु । बैसाखीको आवाज पो रहेछ, बैसाखीकै सहारामा आएका रहेछन् एक सेवाग्राही । कोठा नम्बर सात खोज्दै थिए उनी । बोलाएँ मैले, आफ्नो विपरीत दिशामा रहेको कुर्सीमा बस्न भनें । बसे उनी । आफूलाई भन्दा बढी ख्याल गर्दै भुइँमा राखे बैसाखीलाई ।
“केका लागि आउनुभयो ?” पहिलो प्रश्न थियो मेरो ।
“द्वन्द्वपीडितको सिफारिस चाहियो सर,” सेवाग्राहीको जवाफ थियो ।
“केका लागि चाहियो सिफारिस ?”
“द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीलाई विद्यालयबाट छात्रवृत्ति दिने भनेको छ, त्यसकै लागि हो, सर,” जवाफ दिए उनले ।
“सिफारिस मागेर पाइन्छ ?” जिस्किँदै अर्काे प्रश्न सोधिदिएँ । मलाई कठ्याङ्ग्रिँदो कोठाभित्र पस्न मन थिएन । नढाँटी भन्दा अल्छी बनाएको थियो, न्यानो घामले, काम गर्न मनै थिएन ।
सेवाग्राहीले मबाट सायद त्यस्तो प्रश्नको अपेक्षा गरेका थिएनन् । “के चाहिन्छ त सिफारिसको लागि ?” स्वर र आँखा ठुल्ठूला पार्दै हेर्न थाले मलाई । उनको मुहारमा आक्रोश थियो, सँगसँगै निराशा पनि । आँखा राता बनाए, आगोको ज्वाला जस्तै । आक्रोश स्पष्टै देखिन्थ्यो उनका आँखामा ।
“निवेदन छ ?”
“वडाको सिफारिस छ ?”
“द्वन्द्वपीडितको सूचीमा नाम छ ?”
“थाहा छैन ।”
“द्वन्द्वपीडित हो भन्ने प्रमाण के छ ?”
हात भुइँतिर बढाए उनले, बैसाखी टपक्क टिपे । माथि उठाए, मलाई देखाए, “योभन्दा ठूलो अरु कुनै प्रमाण चाहिन्छ र ?” प्रतिप्रश्न सोधे उनले ।
“बैसाखी बोक्ने जति सबैलाई द्वन्द्वपीडितको सिफारिस दिन मिल्छ र ? गाडी पल्टेर पनि अशक्त भएका हुन सक्छन्, अरु कारण पनि हुन सक्छन्, म त दिन सक्दिनँ,” प्रतिप्रश्नको जवाफ दिएँ मैले पनि । मेरो जवाफले स्तब्ध भए उनी । केही बोलेनन् वा बोल्नै सकेनन् वा बोल्नै चाहेनन्, थाहा पाइनँ मैले ।
जुरूक्क उठे उनी, बैसाखीकै सहारामा । एउटा हात बैसाखीमाथि राखे । लाग्थ्यो, उनको जिन्दगीको भारी बैसाखीले बोक्दै छ । एक पटक मतिर हेरे, आँखा चारैतिर घुमाए । उनी सँगसँगै मैले पनि घुमाएँ आँखा । कोही थिएनन् वरपर । उनी र म मात्र थियौं । केवल दुई जना । सेवाग्राही भएर आएका थिए उनी, म सेवाप्रदायकका रुपमा थिएँ । उनी किन उभिए ? के गर्न खोज्दै छन् ? थाहा थिएन मलाई । सोच्दै गर्दा लगाइरहेको पाइन्टको चेन खोलिदिए उनले, अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई । के गर्दै छ यो मान्छे, पाइन्टको चेन खोलेर ? कतै भित्री र गोप्य अङ्ग त देखाउँदै छैन मलाई ? विचारमग्न भएँ । पाइन्ट बिस्तारै घुडाँतिर सारे र देखाए बन्दुकका गोलीले छियाछिया भएको तिघ्रा । “सर, अरु प्रमाण पनि देखाउनुपर्छ ?”
तर्सिएँ म । तिघ्रा पूरै सुकेको थियो, हेरिरहन सकिनँ । बैसाखीप्रति उनले गरेको मायालाई बुझें । उनको प्रश्नले नाजवाफ भएँ । मनमा कहीँकतै घोचे जस्तै लाग्यो । मस्तिष्क तरङ्गित भयो । कोही मानिस बैसाखीको सहारामा आएको छ । द्वन्द्वले आफ्नो खुट्टा गुमाएको हुँ भन्छ । बन्दुकका गोलीले छियाछिया भएको तिघ्रा देखाउँछ, त्यो सबै देख्दिनँ म, त्यो सबै सुन्दिनँ म । म त केवल कागजका खोस्टाहरू मात्र पो देख्ने भएछु । कागजका खोस्टाहरू मात्र पो पढ्ने भएछु । मैले त मानिसका कथा पढ्नु थियो, मानिसका व्यथा लेख्नु थियो । मल्हम लगाउनु थियो घाउहरूमा । तर म त फेरिँदै गएछु मौसम जस्तै । मानवतालाई बिर्संदै गएछु । असाध्यै माया लाग्यो, मलाई उनको र आफ्नो पनि ।
उनको प्रतिप्रश्नले आफ्नो सोच बदलें । बस्न आग्रह गरें । पहिले जस्तै गरी बसे उनी । बैसाखीको असाध्यै ख्याल गर्दै ।
“कहाँको घटनाले द्वन्द्वपीडित बनायो त ?”
“टाकुरी गाउँको ।”
“कहिलेको घटना हो ?”
“साठी साल वैशाख १० गते ।”
टाकुरी गाउँ, ६० साल वैशाख १० गते सुन्नेबित्तिकै झस्किएँ म । राज्य र विद्रोही पक्ष दुवैतिरका दर्जनौं मानिसले ज्यान गुमाएका थिए त्यो घटनामा । बन्दुकका गोलीले बिजुलीको पोलसमेत छियाछिया भएका थिए । गाउँ मुर्दा बस्ती जस्तै बनेको थियो । कति ठाउँमा त माटो नै रातो बनेको थियो, रगतको आहाल थियो कतिपय ठाउँमा । धेरैका लास सग्लासमेत थिएनन् । केही लास हातविहीन थिए, केही खुट्टाविहीन । टाउको छिनेका पनि थिए । दर्दनाक थियो अवस्था । शोकमग्न थियो गाउँ । सारा गाउँलेका आँखा रसाएका थिए । कतिले त आफ्नै परिवारका सदस्यसमेत गुमाएका थिए ।
“राज्य पक्षबाट हो कि विद्रोही पक्षबाट हो द्वन्द्वपीडित भएको ?” सेवाग्राहीको बारेमा थप जानकारी लिँदै जान थालें ।
“राज्य पक्षबाट ।”
“के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले ?” उनीप्रतिको आत्मीयता बढाउदै लाने प्रयास गरेंँ ।
“भारी बोक्न सक्दिनँ, धेरै हिँडडुल गर्न पनि सक्दिनँ । सानो दोकान छ, दिन बिताउने बाटो, दुईचार ओटा बिस्कुट अनि चाउचाउ राखेको छु । दुई ओटी छोरी छन् । श्रीमती छे । छोरीहरूलाई पढाएर ठूलो मान्छे बनाउने सपना छ । छोरीहरूले मैले रोजेको बाटो नरोजून् जस्तो लाग्छ । म जस्तो पीडित नबनून् जस्तो लाग्छ । कहीँकतैबाट छोरीहरूलाई पढाउन केही सहयोग पाए सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।”
“तिघ्रामा लागेको गोली अन्त लागेको भए बाँच्नै गाह्रो हुने थियो होला, भाग्यले बँच्नुभएछ, भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ । घटना कसरी भयो ? केके भयो ?”
“दुई सय जनाको टोली थियो हाम्रो । कमान्डरले नेतृत्व गरेका थिए । कहाँ लिएर जाँदै थिए उनले, केही थाहा थिएन । थाहा थियो त आक्रमण गर्न जाँदै छौं भन्ने मात्र । रातभर हिड्थ्यौं हामी, जङ्गलै जङ्गल । दिनभर सुरक्षित ठाउँ खोजेर बस्थ्यौं । सानोसानो समूह बनाएर स्थानीयका घरमा खाना बनाउन लगाउथ्यौं । खान्थ्यौं । गाउँलेहरूले डरले खुवाए वा मायाले, थाहा छैन, अहिले पनि भन्न सक्दिनँ । चिउरा र चाउचाउ बोकेका थियौं, हामीले । तीन दिन हिँडेपछि मात्र थाहा भयो, हामी टाकुरी गाउँमा आक्रमण गर्न जाँदै छौं भनेर ।
राति नौ बजेपछि चारैतिरबाट घेर्‍यौं टाकुरी गाउँलाई । र आक्रमण थाल्यौं । पहाडको टुप्पोमा थियो गाउँ, टाकुरामै थियो चौकी पनि । गाह्रो थियो, हामीलाई लडाइँ गर्न तर मनमा विश्वास थियो । थाहा छैन, कहाँबाट आयो, त्यो समयमा त्यत्रो आत्मविश्वास ? मर्न र मार्न कसरी तयार भयौं हामी ? म आफूलाई समेत थाहा छैन । केका लागि लड्यौं हामी ? लडेर के पायौं ? सम्झिँदा विरक्त लाग्छ । तर त्यो समयमा पूरै एकहोरो भएको थिएँ । शासन सत्ताको विरूद्धमा थिएँ ।
आक्रमण सुरू हुनेबित्तिकै गोली चल्न थाल्यो । दुस्मनलाई सिध्याउन ज्यानलाई हत्केलामा राखी लडें । लड्दै जाँदा जे देखे पनि दुस्मनै जस्तो लाग्ने रहेछ । रुखका पात हल्लिँदा पनि दुस्मनै जस्तो लाग्ने । चराहरूले खस्य्राकखुस्रुक गर्दा पनि दुस्मन जस्तो लाग्ने । रुखका पातमा समेत हानियो, कति पटक गोली ।
लडिरहेको थिएँ । थाहा छैन, कताबाट आयो गोली, कसले हान्यो गोली ? मेरो यही दाहिने तिघ्रामा लाग्यो, उभिन सकिनँ, डङ्रङ्गै लडें । त्यसपछि के भयो ? केही थाहा छैन । ब्यूँझिँदा दोभान चौरमा थिएँ । आँखा टाकुरी गाउँतिरै थिए । सूर्य उदाइसकेको थिएन । रातो देखिएको थियो क्षितिज । तर दोभानचौर डरत्रासले ब्यूँझिन सकेको थिएन । सबै घर बन्द थिए । कहीँ कतै कोही देखिँदैनथे । बस्तीमा मानिस नभएको भान भइरहेको थियो ।
म प्यासले छटपटिएको थिएँ । तिघ्राको दुखाइ सहनै नसकिने गरी बल्झिरहेको थियो । साथीले सकीनसकी बोकिरहेको थियो मलाई । मैले मागिरहेकोे थिएँ, “पानी पानी ।” पानी नै नखाई जिन्दगी सकिन्छ कि जस्तै भएको थियो । पानीको मुहान कहीँकतै देखिँदैनथ्यो । मानिसका घरमा गएर पानी मागेर खान सक्ने अवस्थासमेत थिएन । घरहरू सबै बन्द गरिएका थिए ।
“ए भाइ,” मलाई बोकिरहेको साथी करायो ।
सानो बच्चाले हामीलाई देख्यो । १२–१३ वर्षको जस्तो थियो ऊ । हामीलाई देख्नेबित्तिकै डराएर भाग्न थाल्यो । हातमा पानीको लोटा बोकेको थियो उसले । सायद जङ्गलतिर शौच गर्न जाँदै थियो ।
“ओ भाइ पानी छ ?” मलाई बोकिरहेको साथीले भुइँमा राख्यो र जोडले चिच्यायो । साथीले उसलाई पिछा गर्न थाल्यो । बच्चा झनै तर्सियो, पानीको लोटा त्यहीँ छाडेर सासै नफेरी घरतिर दौडियो, अलप भयो हाम्रो आँखाबाट । त्यही लोटाको पानी खुवाइदियो साथीले मलाई । मेरा लागि पानी मात्र थिएन त्यो, रातभर लडेको, तिघ्रामा गोली लागेको, प्यासले छटपटिएको म, त्यो अमृत जस्तै भयो । एकैचोटि पिएर सिध्याएँ । अहिले सम्झँदा लाग्छ, त्यो पानी पिउन नपाएको भए सायद म बाँच्ने थिइनँ ।’’
आफ्नो घटना विवरण सिध्याए उनले । लामो सास फेरें मैले ।
“पानी पिलाउने बच्चाको केही हुलिया याद छ तपाईंलाई ?”
बच्चा सानो थियो । खुट्टामा चप्पल लगाएको थियो । मसिना थिए खुट्टा, सायद दुब्लो थियो ऊ । जाँघे लगाएको थियो । सेतो भेस्ट लगाएको थियो । टाउको खौरिएको थियो । टुप्पी थियो । सायद भर्खर व्रतबन्ध गरेको बाहुनको बच्चो थियो ऊ ।
सम्झिएसम्मका सबै हुलिया बताए उनले ।
एकटकले हेरिरहें मैले उनीलाई । मर्न र मार्न तयार भएका उनी अपाङ्ग भएका थिए, घरव्यवहार चलाउनै नसक्ने अवस्थामा थिए । थकित देखिन्थे, सायद हारिसकेका थिए जिन्दगीबाट । उत्साह र उमङ्गविहीन बनेका थिए । विगत सम्झेर निकै पछुताइरहेका थिए । उनको आँखाले यही बताउँथ्यो ।
“निवेदन लेख्नू द्वन्द्वपीडितको सिफारिस बनाइदिन्छु,” मैले भन्दै गर्दा मेरो मुहारमा एकहोरो हेरिरहे, उनले । सायद मेरो कुरामा विश्वास गर्न सकेनन् ।
“द्वन्द्वपीडित हो भनी प्रमाण चाहिँदैन र ?” ठूल्ठूला आँखा बनाउदै व्यङ्ग्यमिश्रित स्वरमा सोधे ।
“निवेदनबाहेक केही चाहिँदैन । तपाईंका लागि द्वन्द्वपीडितको प्रमाण मै हुँ । तपाईं घाइते हुँदा, तपाईंले पानी माग्दा, पानीको लोटा बाटोमै छाडेर भाग्ने बच्चा अरु कोही थिएन, मै थिएँ । त्यसैले मै हुँ तपाईंका लागि द्वन्द्वपीडितको प्रमाण,” मैले भनें ।
मुम्बई । अभिनेत्री दिया मिर्जाले चलचित्र उद्योगमा ‘सेक्सिज्म’ (लिंगभेद) हुने गरेकाे बताएकी छन् । ‘रहना है तेरे दिल मे’ बाट बलिउडमा... ८ घण्टा पहिले
डिजिटल प्लेटफर्ममा आजदेखि हेर्न सकिन्छ यी चलचित्र
काठमाडौं । पछिल्लो समय डिजिटल प्लेटफर्मको लोकप्रियता बढ्दो छ । कोरोना महामारीका कारण हलभन्दा ल्यापटपमा चलचित्रको मजा लिनेको संख्या बढ्दै... १५ घण्टा पहिले
आफ्नो निधनबारे हल्ला फैलिएपछि मुकेश खन्ना यसो भन्छन्...
मुम्बई । चर्चित धार्मिक टेलिश्रृंखला ‘महाभारत’मा भिष्म पितामह र शक्तिमानबाट दर्शकको मन जितेका दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्नाको निधन भएको भन्दै... १७ घण्टा पहिले
यसकारण गायिका गागा शाहरुख खानसँग डेट गर्न चाहन्नन्
मुम्बई । बलिउडका बादशाहको रूपमा परिचित अभिनेता शाहरुख खान भारतमा मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चित छन् । उनको यही स्टारडमका... मंगलबार, वैशाख २८, २०७८
नेपालमा गौतमबुद्ध अवार्ड जितेकै दिन ब्रत्य बासू शिक्षामन्त्री नियुक्त
काठमाडौं । नेपालमा सोमबार नेपाल इन्टरनेशनल फिल्म फेष्टिभल (निफ)मा अवार्ड जितेका भारतीय चलचित्र निर्देशक ब्रत्य बासू मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्... मंगलबार, वैशाख २८, २०७८
नेपाली फिल्ममेकरलाई अनुरागको चुनौती– पैसा खोज्न होइन, राम्रो कथा लेखेर आफूलाई प्रमाणित गर्नुस्
काठमाडौं । नेपाली अधिकांश फिल्ममेकरको सधैँ एउटै गुनासो छ– बजेट अभावले सोचेजस्तो चलचित्र बनाउन सकिएन । यो खेमाका मेकरको एउटै... मंगलबार, वैशाख २८, २०७८